Kachasị ụmụ nwanyị Tracksuit Velor Long Sleeve Sweatsuit Zip Up Hoodie Manufacturer and Factory | Lọng
Ụmụ nwanyị Tracksuit Velor Long Sleeve Sweatsuit Zip Up Hoodie
Anyị chepụtara otu akwa nke na-adịcha mma ma na-adị njikere maka oyi. Ee, anyị na -ekwu maka velvet. Akwa a dị nro ma na-egbu maramara na-eme ihe ọ bụla ị na-eyi karịa ọmarịcha ma dị njikere maka ezumike, mana ọ bụkwa akụkụ zuru oke iji bulie ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ anya n'oge ọnwa oyi niile. ọtụtụ afọ, nchụpụ ahụ dị mfe, enwere akara ngosi dị mfe na igbe aka ekpe, ma ọ bụ ihe ọ bụla, ọtụtụ ndị ahịa na -azụta jaket velvet naanị n'ihi na akwa bụ velvet, ọ zuru.
Ma ị na-eyi jaket velvet n'elu uwe ma ọ bụ jiri bọtịnụ dị ala na jeans, ọ na-ekwe nkwa inweta otuto ozugbo. Tụkwasa anyị obi - jaketị kachasị amasị gị ga -adị mma karịa ugboro iri mgbe a na -eji velvet. Nke a bụ eziokwu, ọ bụ ya mere ọtụtụ ụmụ nwanyị na -enwe mmasị na egwuregwu, na -azụta jaketị velvet na uwe ogologo ọkpa maka mmega ahụ, dị ka ịgba ọsọ, ịgba ọsọ n'ụtụtụ.
Yabụ ọ bụrụ na ị na -achọ ịgbanwe egwuregwu jaket gị mana ị ka chọrọ otu n'ime nkasi obi nke ụdị ị na -emebu, anyị na -atụ aro ka ị tụlee ụdị jaket ndị a ka ọ dị mma na velvet. Kpachara anya: Ọ na -esiri ike ịhọrọ otu. Enwere ụfọdụ agba oge gboo nke jaket velvet, dị ka agba ojii, ụcha isi awọ, ụcha pink, na agba ọzọ ị nwere ike họrọ na webụsaịtị anyị.
Ihe:Velvet Ndị uwe ojii
Nke gara aga: Ndị Mmebe Nwoke, Ndị Ebipụtara & Ekebere eke
Osote: Ọmarịcha uwe nwoke Polo kacha ere
Logo On Hoodies
Ụmụ nwoke Hoodies
Ndị nwoke na -akọ Hoodies
Hoodie na -ekpo ọkụ
Ndị nwoke na -ere ahịa na -eji ejiji hoodies MH003 dị larịị
Ndị nwoke na -ere ahịa na -eji ejiji hoodies MH002 dị larịị